Mutungamiri weNyika, VaMnangagwa, Vanodzinga Basa VaWebster Shamu
Zimbabwe's President Emmerson Mnangagwa prepares to inspect the guard of honour during the celebrations for the country's 38th anniversary of Independence at the National Sports Staduim in Harare, Wednesday, April, 18, 2018. Thousands of people gathered f
Gurukota rinomirira dunhu reMashonaland West, VaWebster Shamu, vakadzingwa basa nezuro izvo zvinonzi nenyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika zvinoratidza kuti kurwisana mubato reZanu PF kuri kuramba kuchienderera mberi.
Mashoko akaburitswa nemunyori muhofisi yemutungamiri wenyika nedare remakurukota ehurumende, VaMisheck Sibanda, neMuvhuro manheru anoti mutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa vakamisa VaShamu basa vachishandisa zviri mubumbiro remitemo iro rinovapa masimba ekumisa makurukota ehurumende basa.
Mashoko akaburitswa naVaSibanda haana kupa zvikonzero zvakaita kuti VaShamu vadzingwe basa nemutungamiri wenyika. VaSibanda vakaudzawo Studio 7 parunhare kuti vachazotaura zvizere nhasi kuti sei VaShamu vakamiswa basa.
Patabata VaShamu parunhare vati vanga vasati vatambidzwa tsamba yekudzingwa kwavo basa saka nokudaro vati havakwanise kutaura nezvenyaya iyi. Nekune rumwe rutivi, mutauriri waVaMnangagwa, VaGeorge Charamba, vanga vasiri kudaira nharembozha yavo.
Zvichakadai, nyanzvi munyaya yezvematongerwo enyika uye vachishanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, VaDewa Mavhinga, vanoti kudzingwa basa kwakaitwa VaShamu kunogona kunge kwakonzerwa nekubirira kwavanonzi vakaita musarudzo dzema primary eZanu PF kwavanoti kunosvibisa zita rebato iri.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, Muzvare Memory Kadau, vanoti kudzingwa kwaVaShamu kune chekuita nezvikwata-zvikwata zviri muZanu PF, izvo zviri kurwira masimba.
Vatsigiri veZanu PF vakaratidzira muHarare svondo rapera vachiti mumusangano wavo muchine vanhu vari kufungidzirwa kuti vari muchikwata cheG40, icho chaitsigira vaimbova mutungamiri wenyika VaRobert Mugabe pamwe nemudzimai wavo Amai Grace Mugabe.
VaShamu munhu aizivikanwawo nekupembedza zvakanyanya vaive mutungamiri wenyika VaRobert Mugabe, zvekusvika kuvati munhu wemhando yepamusorosoro vachivafananidza nemukaka weupfu weCremora.